The Windows 10 File Explorer inotsigira ISO uye IMG mafaera kunze kwebhokisi, zvinoreva Windows 10 inotsigira kupisa nekuisa ISO uye IMG mafaera.
Kukwira ISO kana IMG faira ibasa rakananga-mberi. Right kuraya pane iyo ISO kana IMG faira wobva wadzvanya pagomo sarudzo yekuisa yakasarudzwa ISO / IMG faira. Nekudaro, pane dzimwe nguva, unogona kuwanaHaukwanise Mount Mount. Iyo disc mufananidzo faira yakaora"Kukanganisa meseji paunoyedza kukanda ISO kana IMG faira."
Panogona kuve nezvikonzero zvakati kuti zvekukanganisa, kuwedzera kune yakajeka yakashatiswa ISO kana IMG faira. Izvi zvinotevera mamwe matipi ekugadzirisa matambudziko anofanirwa kukubatsira kugadzirisa iko kukanganisa uye nokukanda ISO kana IMG faira.
Dhawunirodha iyo ISO kana IMG faira zvakare
Kazhinji kazhinji kwete kudaro, iyo "Iyo mufananidzo mufananidzo faira wasvibiswa" kukanganisa meseji inosimbisa iyo yakaora kana isina kukwana ISO / IMG faira. Kana zvichikwanisika, dhawunirodha iyo ISO kana IMG faira zvakare uye edza kuiisa.
Edza kukwira imwe ISO kana IMG faira
Kana iwe uine imwe ISO kana IMG faira, edza kuiisa. Iyo File Explorer inokanda iko iko kukanganisa kana paine nyaya ne Windows. Kana iyo File Explorer ikakwidza iyo ISO kana IMG faira zvakabudirira, inoratidza zvakajeka iyo ISO / IMG iyo yawakaedza kuvhura kare yakanga yakashatiswa.
Bvisa madhiraivha aripo
Sezvevamwe vashandisi, Windows 10 File Explorer inokanda kukanganisa kana paine akawanda ISO kana IMG mafaira akaiswa muFail Explorer. Saka, zvinokurudzirwa kuburitsa mafaira eiyo ISO kana IMG usati waedza kukwira faira idzva.
Gadziriso faira faira
apo Windows 10 File Explorer inoratidza yakafanana kukanganisa kune akawanda ISO kana IMG mafaera, edza kugadzirisa system mafaera. Yakashatiswa system mafaera inogona kukonzerawo kukanganisa kuri pamusoro.
Tarisa kwatiri maitiro ekugadzirisa mafaira mukati Windows 10 tungamirai mazano-nhanho.
Shandisa chechitatu-bato chirongwa kuisa ISO / IMG
Seyekupedzisira tarisiro, unogona kuedza chechitatu-bato ISO / IMG faira inosimudza application kuisa iyo ISO kana IMG faira iri mubvunzo. Kune akatiwandei mashoma emahara emifananidzo akakwidza zvirongwa zvakatenderedza. Isu tinokurudzira yemahara Virtual CloneDrive software.
Uye kana sarudzo yemakomo isipo, tarisa neyedu Mount Mount inoshaya kubva pane faira mamiriro menyu mukati Windows 10 mutungamiri.
Runza System System Checker Kugadzirisa Yakakanganiswa kana Inosakatika Mafaira In Windows 10